Free Thinker: ခရစ္စတိုဖာ ပေါက်ကျိုင်း ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ (၃)
ခရစ္စတိုဖာ ပေါက်ကျိုင်း ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ (၃)
ဒုတိယပိုင်း (စင်ကာပူအတွေ့အကြုံ - ပထမ ၂ နှစ်) - အပိုင်း (၂)
(၉) သင်္ဘောကျင်း အလုပ်သမားဘ၀
စင်ကာပူမှ လူနေမှုဘ၀ကား တကယ့်ကို struggle ဖြစ်သည်။ “ဘ၀ဟူသည်တိုက်ပွဲ” ဟူသော စကားမှာ စင်ကာပူမှလူတို့အဘို့ ပိုမှန်ပါလိမ့်မည်။ ကလေးဘ၀ကတည်းက ကျောင်းကို အစောကြီးသွားကြရသည်။ အလုပ်စလုပ်ပါပြီဆိုကတည်းက ပင်စင်ယူပြီးသည်၏ ဟိုမှာဘက်အထိ အလုပ်လုပ်ကြရသည်။ အလုပ်၊ အလုပ်၊ အလုပ်နှင့် နေ့ရှိသရွေ့ အလုပ်လုပ်ကြရသည်။ တစ်ပတ်လျှင် ၅ ရက်၊ တချို့လည်း ၆ ရက် လုပ်ကြရ၏။ တစ်နှစ်လျှင်တစ်ခါ ခွင့်ရက်ရှည်ယူကာ နားကြသည်။ များသောအားဖြင့် တရုတ်များဆိုလျှင် တရုတ်နှစ်ကူးမှာ ခွင့်ရက်ရှည် ယူကြသည်။ မလေးတို့မှာ Hari Raya Puasa (ဟာရီရာယာပွာစာ) သို့မဟုတ် Hari Raya Haji မှာ ခွင့်ရက်ရှည်ယူသည်။ များသောအားဖြင့် ခွင့်ရက်ရှည်ယူကြသည်မှာ မလေးဖြစ်စေ၊ ကုလားဖြစ်စေ၊ တရုတ်ဖြစ်စေ၊ မိမိတို့လူမျိုး၏နှစ်ကူးမှာ ယူကြတာများသည်။ မြန်မာပြည်တွင် သင်္ကြန်တွင်း ရုံးရက်ရှည် ပိတ်သကဲ့သို့တည်း။
အလုပ်မလုပ်လို့ကလည်း မရ။ မလုပ်လျှင် ပိုက်ဆံမရ။ ပိုက်ဆံမရှိလျှင် မည်ကဲ့သို့နေမည်နည်း။ မြို့ပြလူနေမှုစနစ်သည်ကား ပိုက်ဆံပေါ် ဖင်ခုထိုင်ထားရသည်ဖြစ်ရာ ပိုက်ဆံမရှိလျှင် အသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ဘို့မလွယ်။ သည်တော့ ကျောင်းကထွက်လာပြီ ဆိုကတည်း က အလုပ်စလုပ်ကြရတော့သည်။ ယခင်က အသက် ၆၀ ပင်စင်ပေးသော်လည်း ယခုအခါ ပင်စင်စားများ နေရေးစားရေးခက်သည့်အတွက် ပင်စင်ယူပြီးနောက်ပိုင်း အလုပ်ပြန်ခန့်ရန် လှုံ့ဆော်လာသည်။ သက်သက်သာသာ လုပ်ရသည့် (သန့်ရှင်းရေး၊ အစောင့် စသည်) အလုပ်များ တွင် အသက်ကြီးသူများအား သူတို့သုံးရေးစွဲရေး ချောင်လည်စေရန် အလုပ်ပြန်ခန့်ထားရန် ဖြစ်သည်။
စင်ကာပူတွင် Marine, Construction, Manufacturing, Process, Service ဟု industrial sector ၅ မျိုးရှိသည့်အနက် Marine (သင်္ဘောကျင်း) နှင့် Construction (ဆောက်လုပ်ရေး) မှာ ပူလည်ဆူလည် အများဆုံးဖြစ်သည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း များမှာ အေးအေးဆေးဆေးပုံမှန်လုပ်ရသော်လည်း သင်္ဘောကျုင်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးမှာမူ project basic ဖြစ်သဖြင့် နောက်က လူလိုက် လာသလို လုပ်ရသည်။ ကျွန်တော် keppel shipyard တွင်လုပ်ရစဉ်ကလည်း overnight ဆင်းရလိုဆင်းရ၊ ည ဆယ်နာရီထိ ဆင်းရလို ဆင်းရ။ တစ်ခါတလေ နာရီပြန်နှစ်ချက်တီးလောက်မှပြီး၍ ရုံးတွင်ပင် ဖြစ်သလို ညအိပ်လိုက်ရသည့်အခါများလည်း ရှိသည်။ အခြားသူများ အဖို့ ဆန်းချင်ဆန်းနေမည်ဖြစ်သော်လည်း သင်္ဘောကျင်းသမားများအဖို့တော့ ရိုးနေပြီ။
ကျွန်တော်တို့နေသော ရီရွှန်းမှ Keppel Shipyard သို့ သွားရာတွင် PIE Expressway မှ သွားရသည်။ အချိန်မှာ နံနက် ၆ နာရီခွဲ မှ ၇ နာရီကျော်အကြား။ ရုံးပြင်ကန္နားများမှလွဲ၍ ကျန် ဆောက်လုပ်ရေး၊ သင်္ဘောကျင်း၊ ၀ပ်ရှော့ စသည်တို့မှာ နံနက် ၈ နာရီဆိုလျှင် အလုပ် စသည်ဖြစ်ရာအလုပ်ချိန်မီရန် ၇ နာရီအချိန်ဆို လူတိုင်းလမ်းပေါ်ရောက်နေကြပြီ။ လမ်းကြီးလမ်းငယ် အသွယ်သွယ်တွင် ကားကြီး၊ ကားငယ် အသီးသီးတို့ ဥဒဟိုပြေးနေကြပြီ။ ထူးဆန်းသည်မှာ ကျွန်တော်တို့ကို သယ်ဆောင်လာသော လော်ရီ PIE လမ်းမကြီးပေါ် တက်လိုက်သည် နှင့် ၆ လမ်းသွား၊ ၈ လမ်းသွား လမ်းမကြီးနှင့်အပြည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ သူ့ထက်ငါ အလုအယက် အပြိုင်အဆိုင် မောင်းနှင်နေကြ သည်ကို တွေ့ရခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
ပထမသော် စင်ကာပူကလူတွေ ဆိုင်ကယ်စီး၊ စီးနိုင်လှချည့်။ ဘယ်တွေများ သွားအလုပ်ဆင်းကြမလို့ပါလိမ့်။ ဘယ်တွေမှာနေ လို့များ ဒီလောက်စုပြုံများနေတာပါလိမ့် စသဖြင့် မေးခွန်းပေါင်းများစွာ ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲ ရှုပ်နေခဲ့ပါသည်။ နောက်တော့မှ အဖြေတွေ့သည်။
ထိုဆိုင်ကယ်များမှာ စင်ကာပူသားက နည်းနည်း။ စင်ကာပူနှင့်ကပ်လျှက် မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျိုဟိုးမှ လာကာ အလုပ်ဆင်းသော မလေးလူမျိုးများဖြစ်ပါသည်။ မလေးရှားနှင့်စာလျှင် စင်ကာပူတွင် နေစရိတ် စားစရိတ်ကြီးသည်။ သို့အတွက် မလေးလူမျိုးများက စင်ကာပူ တွင် မနေ။ စင်ကာပူနှင့် မြစ်သာခြားသော ဂျိုဟိုးတွင်နေကာ စင်ကာပူသို့ မနက်သွား ညပြန် အလုပ်လာဆင်းကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သူတို့ဒုက္ခမှာလည်း မသေးလှပါ။ ထောင်နှင့်ချီသောလူများ စင်ကာပူသို့ တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်ထည်း ၀င်၊ ထွက်ကြသည်ဖြစ်ရာ မလေးရှားနှင့် စင်ကာပူအ၀င်၊ အထွက် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်တွင် တစ်နာရီခန့် တန်းစီကြရသည်။ စင်ကာပူသို့ မနက် ၈နာရီ အလုပ်ချိန် မီရန် ၄ နာရီခွဲခန့်တွင် အိပ်ယာမှ ထကြရသည်။ ညပြန်ရောက်တော့ ၉ နာရီခွဲ၊ ၁၀ နာရီ။ ဂျိုဟိုးတွင်တော့ ပီဘိ၊ အိပ်သည်ဆိုရုံကလေးမျှသာ။ (သူများသာပြောတာ၊ ကျုပ်တို့လည်းမထူးပါဘူးဗျာ။ မနက် ၆ နာရီ အိပ်ယာထ၊ ပြန်ရောက်တော့ ၈ နာရီခွဲ။ အိမ်ဆိုတာ အိပ်တယ်ဆိုရုံပါဘဲ။)
စင်ကာပူနှင့် မလေးရှားကူးသော check point နှစ်ခုရှိရာ Tuas Check Point နှင့် Woodland Check Point ဖြစ်၏။ သို့သော် အများစုမှာ Wood land check point မှဝင်လာကြသည့်ဖြစ်ရာ မနက်မနက် ကျွန်တော်တို့လော်ရီနှင့် ဆုံဆည်းရသော မော်တော်ဆိုင်ကယ် များမှာ အနှီ မောင်မင်းကြီးသားများ ဖြစ်ပါသည်။
အထက်တွင်ပြောခဲ့သလို ကျွန်တော်က QC အနေနှင့် လုပ်ရသည်။ Piping QC ဖြစ်၏။ သင်္ဘောကိုပင်လျှင် ယခုမှ ကျကျနန မြင်ဖူးသော ကျွန်တော့်အဖို့ အရာရာကို အောက်ခြေသိမ်းကစ သင်ရသည်။ အနို့ လုပ်မှမလုပ်ခဲ့ဖူးပဲ။ ဘာမှမသိတာ မဆန်းပါ။ ထို့ထက် သူတို့ပြောသော စင်းဂလစ်ရ်ှ (Singlish) ကိုလည်း မနည်းနားလည်အောင် နားထောင်ရသေးသည်။ ရောက်စတုံးက ကောင်းကောင်း နားမလည်။ Ah Wee က ကျွန်တော့်ကို ဖိုင်ယူခိုင်းသည်။ ဖိုင်ယူခိုင်းတာ ကျွန်တော့်နားထဲတွင်တော့ ဖာ ဟုသာကြားသည်။ ဘာယူခိုင်းမှန်း မသိ။ အနီးရှိတစ်ယောက်က ယူပေးလိုက်မှ သူပြောသည့် ဖာ သည် ဖိုင်ကိုဆိုလိုမှန်း သဘောပေါက်ရသည်။
တစ်နေ့ကလည်း နေ့ခင်း လဖက်ရည်ချိန်တွင် (နေ့လည် ၃ နာရီ) သူတို့က ကျွန်တော့်အတွက်ပါ လဖက်ရည် တစ်ထုပ်ဝယ်လာ သည်။ သူတို့က ကော်ဖီ၊ လဖက်ရည်များကို ပါကင်ဆိုလျှင် ပလတ်စတစ်နှင့်ထုပ်ကာ အပေါ်မှ ကြိုးဖြင့်ချည်ပြီး ဆွဲကြသည်။ လမ်းလျှောက် သောက်သူများကမူ ကြိုးကိုမချည်ဘဲ အိတ်အတွင်း ပိုက်ထည့်ကာ ပူနေသေးသော လဖက်ရည်ကို တစ်ဘူးဘူးနှင့်မှုတ်ထုတ်ကာ သောက်ကြ ၏။ ကျွန်တော့်မှာ ရလာသော လဖက်ရည်ထုပ်ကို ဘယ်လိုကြိုးဖျည်ရမှန်းမသိ။ သူတို့က လဖက်ရည်များသောက်လို့ ကုန်ပင်ကုန်တော့မည်။ ကျွန်တော်လည်း လူမသိအောင် စားပွဲအောက်အသာလက်လျှိုလျှက် ကြိုးကို ကြိုးစားဖြည်ကြည့်သည်။ သည်တော့မှ ပိုဆိုး၏။ ခိုးကြောင် ခိုးဝှက် ဖြည်လိုက်သော ကြိုးသည်အကုန်ပွင့်လျှက် ကြမ်းပေါ်သို့ လဖက်ရည်များ ဖိတ်ကုန်တော့၏။ အားလုံးဝိုင်းဟားတာ ခံလိုက်ရသည်။ အတော်လည်း ရှက်သွားမိ၏။
သူဌေးက ကျွန်တော့်ကို ပထမ မင်း၊ သူ့နောက်လိုက်၊ သူလုပ်တာလေ့လာ ဟု မာလာ့နောက်ကို လိုက်ခိုင်းပါသည်။ မာလာ ဘာတွေလုပ်နေမှန်း ကျွန်တော်နားမလည်။ တော်ကြာ Hitachi သွားကာ timesheet များယူပုံ ပြလိုက်။ တော်ကြာ FELS သွားကာ အဲဒီမှာလုပ်နေတာတွေ ဖိုမင်တွေကို မေးလိုက်။ တော်ကြာ အိုဗာတိုင်ဆင်းမည့် request form များ တင်ခိုင်းလိုက်။ ဘာအလုပ်ရယ်လို့ သတ်သတ်မှတ်မှတ်မရှိ။ သည်လိုနှင့် နှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့မှ မာလာက မင်း သူ့ကို ၀ိုင်းကူလိုက်ဟု ဆိုကာ QCV နှင့် တွဲပေးလိုက်ပါ သည်။
ကျွန်တော် ကံကောင်းပါသည်။ QCV က အလွန်စိတ်ထားကောင်းသည်။ အတန်းပညာမတတ်ရှာသော်လည်း လုပ်ငန်းသဘာဝကို ကောင်းကောင်းနားလည်သည်။ ကျွန်တော့်ကို သေသေချာချာ ရှင်းပြ၊ သင်ပေးပါသည်။ အမှန်က ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ပါ။ ကိုဇော်ဟိန်းထွန်းနှင့် အတူတူ ဖြစ်၏။ မင်းက catch up လုပ်တာ အရမ်းမြန်တယ် (အတတ်မြန်တယ်) ဟု သူက ဆိုပါသည်။ မမြန်ရအောင် ဘာများခက်ပါသနည်း။ ဆယ်တန်းမအောင်သည့် သူများကို သင်ပေးလျှင်သော်မှ လုပ်တတ်သည်။ အဆင်သင့်ရှိပြီးသား ပုံစံစာရွက်တွေယူ။ လိုတာဖြည့်။ စာရွက်စာတမ်း တင်ရမည့်နေရာ သွားတင်။ ယူရမည့် certificate များ သွားယူ။ ပညာသားပါတာဆို၍ ဘာမှမရှိ။ သည်အစီအစဉ်အတိုင်း အသာမျှောလုပ်သွားရုံ ဖြစ်ပါသည်။ ဒါတောင် ကျွန်တော်ရောက်စက Keppel Piping Section မှ အန်း (Ng) ဆိုသူ က ဒီကောင် အလုပ်လုပ်တာ အရမ်းနှေးတယ် ဟု complain လုပ်ပါသည်။ ထိုအခါ သူဌေးက QCV ကိုခေါ်ကာ Keppel က ဒီကောင် အလုပ်လုပ်တာ အရမ်းနှေးတယ်လို့ ငါ့ကို complain လာလုပ်ပါလား ဟု မေးပါသည်။ QCV က He is still under training. ဟု ပြန်ဖြေတာ ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းမှတ်မိနေပါသည်။
စင်ကာပူသည်ကား အရာရာကို စံချိန်စံညွှန်းအပြည့်နှင့် ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ စနစ်တကျ၊ မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်နေသော တိုင်းပြည်ဖြစ်ပါသည် ဆိုလျှင် ငြင်းလို့မရပါ။ သို့သော်လည်းလေ၊ သူတို့လည်း လူတွေပေကပဲ။ အနည်းအပါးတော့လည်း အကြံအဖန်လေး၊ ဘာလေးရှိပေမပေါ့။ သည်အကြံအဖန်များထဲတွင် ကျွန်တော်တို့ low levy ဖြေတာ တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပါသည်။
စင်ကာပူတွင် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများခန့်ထားခြင်းအတွက် ကုမ္ပဏီမှ အစိုးရသို့ levy ပေးရပါသည်။ ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ဟု သတ်မှတ်ထားသော လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူများကို low levy၊ ထိုလက်မှတ်မရှိသူများကို high levy ဟု ခေါ်ပါသည်။ low levy နှင့် high levy ပေးဆောင်ရတာချင်း အလွန်ကွာပါသည်။ အနည်းဆုံးတော့ ၂၀၀ ခန့်ကွာပါသည်။ တစ်လလျှင် လူတစ်ဦး ၂၀၀ ပဲထားပါဦး။ လူ ၂၀ ဆိုလျှင် တစ်လ ၄၀၀၀၊ တစ်နှစ်ဆိုလျှင် လေးသောင်း။ အားပါး၊ နည်းသည့်ပိုက်ဆံမဟုတ်ပါ။
သည့်အတွက် ကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီး များမကြာမီပင် ကုမ္ပဏီက ကျွန်တော်တို့ low levy စာမေးပွဲဖြေဘို့အရေး ကြိုးပမ်းပါတော့ ၏။ ပထမ ကျွန်တော်တို့ကို work shop သွားပြီး welder ကြီးများထံအပ်ကာ ဂဟေဆော်လေ့ကျင့်ခိုင်းပါသည်။ ညနေ ၄ နာရီ လောက်ဆို လျှင် ကျွန်တော်တို့လူသိုက် ၀ပ်ရှော့သွားကာ ဂဟေချောင်းကြီးများကို ဟုတ်တိပတ်တိကိုင်လျှက် ဂဟေဆော်လေ့ကျင့်ကြပါသည်။ တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ low levy ဖြေရတော့မည် ဆို၏။
တစ်သက်လုံးက မြင်တောင်မှ မမြင်ဖူးခဲ့သော သည် ဂဟေဆော်တာကို တစ်နေ့နှစ်နာရီ၊ တစ်ပတ်လောက် လက်ပူတိုက်ရုံမျှနှင့် ဖြေရမည်ဆိုလျှင် (ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က အရီးတို့ ပုံခိုင်းသလို) ရှေ့သွားနှစ်ချောင်း - င် ပြောင်းပေါက်တောင် အောင်မှာမဟုတ်ပါ။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့အားလုံး အောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ဘယ်ပုံအောင်ခဲ့ကြပါသနည်း။
ဖြေရသည်မှာ PEC (Plant Engineering Construction) တွင် ဖြစ်ပါသည်။ Welding စာမေးပွဲဖြေဘို့ ဂဟေဆော်သည့် ခုံများ၊ စက်များ၊ ဂဟေချောင်းများ၊ နေရာများ ကျကျနန လုပ်ထားပါသည်။ ဂဟေဆော်သည့်နေရာကို တစ်ဦးချင်းသီးသန့် လုပ်ပေးထားပါ၏။ ဂဟေ မီးများမထွက်စေရန် ၀င်သည့်ဘက်မှလွဲ၍ ကျန်သုံးဘက်ကို အကာများကာပေးထားပါသည်။ အပြင်လူ သိပ်မမြင်ရပါ။ ဤအကာအရံများ သည်ပင် ကျွန်တော်တို့အတွက် အကွက် ဖြစ်ပါ၏။
ပထမဦးဆုံး နာမည်ခေါ်ကာ ဂဟေဆော်ရမည့် သံပြားများ ထုတ်ပေးပါသည်။ မိမိသံပြားပေါ်တွင် မိမိဘာသာ နံပါတ်များရိုက်ရ၏။ ထို့နောက်တော့ ဘယ်လိုဆော်ရမည် ရှင်းပြကာ မိမိအတွက်သတ်မှတ်ပေးထားသော နေရာသို့သွားကာ စတင်ဆော်ရပါ၏။ စက်များတွင် ဗို့အားနှင့် အမ်ပီယာကို ချိန်ပြီးသားဖြစ်ရာ ဤအတွက် ပူစရာမလို။ ကျွန်တော်တို့လူစုလည်း ခပ်တည်တည်နှင့် စတင်ဆော်ကြ၏။ များမကြာ မီ ကျွန်တော်တို့ ဂဟေဆော်ခြင်းကို စစ်ဆေးသော အရာရှိရောက်လာပါ၏။ Surveyor ဟု ခေါ်ပါသည်။ သူက လာမေး၏။ မင်း ဂဟေဆော် တတ်သလား။ ဟုတ်၊ သိပ်တတ်။ တကယ်တတ်။ ဘုရားစူးရပါစေ့တတ်။
များမကြာမီပင် ထို surveyor ပြန်ထွက်သွားသည်။ ထိုအခါကျမှ ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် လိုက်ပါလာသော ဘန်ဂလား welding ဖိုမင် ဆာရီကူး ပြာပြာပြာပြာနှင့် ရောက်လာပါသည်။ သူရောက်လာတော့ သူက ဂဟေဆော်၊ ကျွန်တော်က အပေါက်ဝ နားသွားကာ အရိပ်အခြည်ကြည့်။ ဂဟေဆော်ရမည့်သံပြားမှာ လေးလက်မမျှသာ ရှိရကား သူဆော်လိုက်တာ ဘာမျှမကြာ။ ခဏနှင့်ပြီးသွား ၏။ ကျွန်တော်ပြီးတော့ နောက်တစ်ဦးဆီ ဆက်။ သူဆော်ပေးသွားသော သံပြားကို ကျွန်တော်က ဟန်နှင့်ပန်နှင့် ချော်များခေါက်ထုတ် နေလိုက်ပါသည်။
အတော်ကြာတော့ စစ်ဆေးသူများရောက်လာကာ ပြီးပြီလားဟေ့ ဟု အော်ကျယ်အော်ကျယ်နှင့် မေး၏။ ကျွန်တော်တို့လည်း ခပ်တည်တည်နှင့် Yes, already finished. ဟု ခပ်ကြွားကြွားဖြေကာ ဆာရီကူးဆော်ပေးသွားသော သံပြားကို ညှပ်နှင့်ကိုင်လျှက် သွားပေး လိုက်ကြ၏။ သည်သံပြားများကို ဓါတ်ခွဲခန်းပို့ကာ X-Ray ရိုက်ကြည့်မည်။ အပြစ်အနာအဆာကင်းမှ အောင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးမည်။ ထို အောင်လက်မှတ်ရလျှင် low levy ဖြစ်မည်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုလို အောင်ကြပါ၏။ တစ်ယောက်တော့ ကျသည်။ ကျမှာပေါ့။ လူ လေးငါးဆယ်ယောက်လောက်ကို အချိန်ပိုင်းအတွင်း ဆာရီကူးတစ်ယောက်တည်း အပြေးအလွှား ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ဆော်ပေးရသည်ပဲ။ သည်လောက်အောင်တာပဲ ကျေးဇူးတင်ပါဦး။
ကိုင်း၊ မှတ်ပလား။ ဒါ စင်ကာပူ standard ကို ကျွန်တော်တုိ့သူဌေးက အကြံအဖန်လုပ်ကာ ကျော်လွှားချခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒါ သူတစ်ဦးထဲမဟုတ်။ စင်ကာပူတစ်နိုင်ငံလုံး သည်အတိုင်းချည်း ဖြစ်၏။
S Pass မှန်လျှင် အနည်းဆုံး လခ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၈၀၀ ပေးရမည်။ နောက်ပြီး ငွေသားနှင့်ပေးလို့မရ။ အထောက်အထားရ အောင် Bank Transfer ဖြင့် ပေးရမည်။ သည်ကဲ့သို့မပေးလျှင် သို့မဟုတ် မပေးဘဲ ပေးသည်ဟု လိမ်ညာလျှင် ဒါဏ်ငွေ ဘယ်လောက်၊ ထောင်ဒါဏ်ဘယ်လောက် ဟု ဥပဒေဖြင့် ပြဌာန်းထားသည်။ ဒါလေးများ။ ပေးတာပေါ့။ ဘာဖြစ်လဲ။ အလုပ်သမား၏ account အတွင်းသို့ ၁၈၀၀ အပြည့်ထည့် ပေးလိုက်သည်။ နောက်ပြီးတော့မှ ၉၀၀ ပြန်တောင်းသည်။ လွယ်ပါ့။ နင်တို့ ဥပဒေလောက်ကတော့။
Employment of Foreign Manpower Act (Chapter 91A) ၏ First Schedule အပိုဒ် ၂၀၊ ၂၁ နှင့် ၂၂ များတွင် အလုပ်ရှင် တစ်ဦး အနေနှင့် အလုပ်သမားများ၏ လစာငွေထဲမှ ဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိသော ငွေကြေးများကို ဖော်ပြထားရာ ဤအထဲတွင် အေးဂျင့်ဖီးလည်း အပါအ၀င်ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် ဥပဒေကမည်သို့ပင်ပြဌာန်းထားသည်ဖြစ်စေ၊ အချို့အလုပ်ရှင်များက အလုပ်သမားများထံမှ အေးဂျင့်ဖီးယူပါသည်။ (ကျုပ်တို့က သူတို့မိသားစု အဆင်ပြေပါစေ ဆိုပြီး သူ့ကို အလုပ်ခန့်လိုက်လို့ သူတို့က ကျုပ်ကို ကျေးဇူးဆပ်တဲ့အနေနဲ့ ကန်တော့တာပါဗျာ။ ကျုပ်က အေးဂျင့်ဖီးတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဟုတ်တယ်မို့လား၊ ဟေ့ကောင်တွေ။)
ကျွန်တော့်အလုပ်မှာ ပိုက်ရှော့ပြေးလိုက်၊ Keppel ရုံးများပြေးလိုက်၊ စတို ပြေးလိုက်၊ သင်္ဘောပေါ်တက်လိုက် ဆိုတော့ သွားရေးလာရေး အဆင်းပြေစေရန် မာလာက စက်ဘီးတစ်စီး ပေးပါသည်။ လိမ္မော်ရောင်ကလေးဖြစ်၏။ သွားရလာရတာ အတော် အဆင် ပြေသွားသည်။ မဟုတ်လျှင် ဝေးပင်မဝေးလှသော်လည်း တစ်နေကုန် တောက်တောက် တောက်တောက်နှင့် လျှောက်သွားနေရတာ မသက်သာလှပါ။ သို့ ပေးပင်ပေးသော်ငြားလည်း ကြာကြာမခံလိုက်။ နှစ်ပတ်လောက်စီးပြီး စက်ဘီးကို လူခိုးခံလိုက်ရပါသည်။
ကျွန်တော်တို့စက်ဘီးများမှာ အိမ်ပြန်ချိန်တွင် ရုံးရှေ့၌ သည်အတိုင်း သော့ခတ်ထားခဲ့ရသည်ဖြစ်ရာ ညပိုင်း လူရှင်းချိန် လာမ, သွားခြင်းဖြစ်ပါ၏။ QCV က မင်းသော့လေးက သေးတာကိုးကွ ဟု ဆို၏။ သိပ်မကြာလိုက်ပါ။ သော့ကြီးကြီးခတ်ထားသော သူ့စက်ဘီး လှလှ ကလေးမှာလည်း အခိုးခံလိုက်ရတော့သည်။
အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာ၍ စင်ကာပူမှ စက်ဘီးသူခိုးများအကြောင်း ဖောက်သည်ချချင်ပါသေးသည်။ ကျွန်တော် စင်ကာပူ ရောက်စက ဓါတ်တိုင်များ၊ လမ်းဘေး သံခြံစည်းရိုးများတွင် ရှေ့ဘီးချည်း သော့ခတ်ထားသော စက်ဘီးခွေများကိုလည်းကောင်း၊ သော့ခတ် လျှက်သား စက်ဘီးဘော်ဒီများကိုသော်လည်းကောင်း တွေ့ရ၏။ ကျွန်တော့်စိတ်တွင် ဒီလူတွေ ဘာ့ကြောင့်များ တစ်ဘီးထဲ၊ ဒါမှမဟုတ် စက်ဘီးဘော်ဒီချည်း သော့ခတ်ထားရပါလိမ့်။ အတော်အူတဲ့ လူတွေပဲ ဟု တွေးမိပါသည်။ နောက်မှ သော့ခတ်ထားသော ဘီး၊ သို့မဟုတ် ဘော်ဒီကိုထားခဲ့ကာ ကျန်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြုတ်ခိုးသွားမှန်း သိရပါ၏။ ၎င်းတို့ကို စက်ဘီးပြင်ဆိုင်များသို့ သွားရောင်းသည်။
အချို့ကျတော့ လော်ရီပေါ်တွင် ၀ါယာဖြတ်သည့်ပလိုင်ယာ အကြီးကြီးကို အဆင်သင့် တင်ထားပါသည်။ ထိုပလိုင်ယာကြီးများမှာ အားကောင်းလှသဖြင့် တော်ရုံတန်ရုံသံချောင်းများကို အသာလေး ဖြတ်နိုင်ပါသည်။ ဒရိုင်ဘာက ကားမောင်းနေရင်း ကျီးကန်းတောင်းမှောက် ဟိုကြည့်သည်ကြည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာသည်။ လူလစ်သည့်တစ်နေရာရာတွင် စက်ဘီး သော့ခတ်ထားသည် တွေ့ရပါက ကားကို လမ်းဘေး အသာထိုးရပ်ကာ ထိုသံဖြတ်ပလိုင်ယာကြီးနှင့် သော့ခတ်ထားသော သံကြိုးကို ဖြတ်ကာ စက်ဘီးကို လော်ရီပေါ်မ, တင်သွား ပါသည်။ နောက်ပြီး ဆေးပြန်မှုတ်ကာ တစ်စီးလျှင် ၃၀ ဖြင့် သင်္ဘောကျင်းများတွင် လိုက်ရောင်း၏။ ကျွန်တော် ပထမစက်ဘီး ပျောက်သွား တော့ ဤကဲ့သို့စက်ဘီးတစ်စီးကို ၃၀ ပေးကာ ၀ယ်စီးရသည်။ ဤသို့ခိုးသူများထဲတွင် Tellus မှ Ah Low (အာ့လောင်း ဟု ခေါ်၏။) ဆိုသူ ဒရိုင်ဘာ တရုတ်အဖိုးကြီးလည်း အပါအ၀င် ဖြစ်၏။
ကျွန်တော်က QC ဆိုတော့ သင်္ဘောပေါ် အချိန်ပြည့်သွားနေစရာမလို။ သို့တိုင် သူတို့လုပ်ထားသော ပိုက်လိုင်းများ ကြည့်ရန် မကြာခဏဆိုသလို သင်္ဘောပေါ်တက်ရ၏။ သည်သို့တက်သည့်အချိန်များတွင် မိမိဘာသာ အချိန်ကို တိုင်မင်ကိုက်ထားရသည်။ သင်္ဘော ပေါ်မှ ဆင်းချိန်ကို ကန့်သတ်ထား၏။ နေ့လည် ထမင်းစားချိန်မတိုင်မီ ၁၁း၃၀ မှ ၁၂း၀၀ ထိ တစ်ချိန်၊ ညနေ အလုပ်ဆင်းချိန် ၄း၀၀ မှ ၄း၃၀ ထိ တစ်ချိန်၊ သင်္ဘောပေါ်မှ ဆင်းလာသူများကို သင်္ဘောပေါ် အတက်အဆင်းလုပ်သည့် gang way (ကုန်းဘောင်) များမှ စောင့်ဖမ်းကာ ဒါဏ်ငွေ ၅၀ ရိုက်ပါသည်။ ထမင်းစားချိန် နှင့် အလုပ်ပြန်ချိန်များတွင် စောဆင်းမလာစေရန် ကန့်သတ်ထားခြင်း ဖြစ်၏။
သို့အတွက် ထမင်းစားဆင်းတော့မည်ဆိုလျှင် ၁၂နာရီမတ်တင်းလောက်တွင် သင်္ဘောပေါ်မှ ဆင်းကြရန် gang way အပေါက်ဝ၌ ရာနှင့်ချီသောလူများ တန်းစီနေသည်ကို တမျှော်တခေါ်ကြီး တွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်္ဘောပေါ် အတက်အဆင်းလုပ်သည့် gang way မှာ ရှေ့ဘက်တွင် တစ်ပေါက်၊ နောက်ပိုင်းတွင် တစ်ပေါက်။ စုစုပေါင်းမှ နှစ်ပေါက်မျှသာရှိရာ ရာဂဏန်းမျှရှိသော သင်္ဘောပေါ်တွင် အလုပ်လုပ် နေသူများမှာ ထိုအပေါက်တွင် သူ့ထက်ငါ အတင်းလုယက် တန်းစီကြပါသည်။ မစီလို့ကလည်း မဖြစ်။ ထမင်းစားချိန်မှာ စုစုပေါင်းမှ ၁၂ နာရီမှ ၁ နာရီ ထိ တစ်နာရီမျှသာ ရသည်ဖြစ်ရာ ထိုတစ်နာရီအတွင်း သင်္ဘောပေါ်မှ ဆင်းချိန်၊ ကန်တင်းသို့လမ်းလျှောက်ချိန်၊ ကန်တင်းတွင် ထမင်းဝယ်ရန် တန်းစီချိန်၊ ထမင်းစားချိန်။ ကန်တင်းမှ သင်္ဘောပေါ်ပြန်တက်ချိန် စုစုပေါင်းကို နှုတ်လိုက်လျှင် နားချိန်မှာ နာရီဝက်ပင်မကျန်။ သို့အတွက် ကန်တင်းသို့ အလျင်ရောက်ကာ ထမင်းအလျင်တန်းစီနိုင်ရေးအတွက် gang way တွင် အပြေးအလွား တန်းစီကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အလုပ်လုပ်ရင်း ပြန်ဆင်းချိန်နောက်ကျ၍ ဤကဲ့သို့သော အခါများနှင့်ကြုံရလျှင် ကျွန်တော်ကတော့ အေးအေးဆေးဆေးပင် သူတို့နောက်မှ တန်းမစီဘဲ ဆင်းလိုက်လေ့ရှိပါသည်။ သူတို့လို ၁ နာရီတီးသည်နှင့် သင်္ဘောပေါ် ပြန်တက်စရာ မလိုသောကြောင့်ဖြစ်၏။ Gang way တွင်မူ တန်းစီသူများကို ထိန်းရန် Keppel မှ supervisor များ၊ Safety များ စောင့်ကြပ်နေပါ၏။ သူတို့မှာမူ အားလုံးဆင်းပြီး သွား၍ သင်္ဘောပေါ်တွင် လူမကျန်တော့မှ ဆင်းလာကြရသည်။
နေ့ခင်း ထမင်းစားချိန်အပြီး ၁ နာရီတွင် အလုပ်ပြန်စပါသည်။ ထမင်းစားဆင်းချိန်၊ အလုပ်ပြန်စချိန်များတွင် သင်္ဘောကျင်းမှ ဥသြ မှုတ်ကာ အချက်ပေး၏။ ထိုအချက်ပေးသံကြားလျှင် သင်္ဘောပေါ် အတက်အဆင်း လုပ်ကြရသည်။ ၁ နာရီ ဥသြဆွဲ၍ အလုပ်ပြန်စချိန်တိုင် မထသေးပဲ ဇိမ်နှင့် ဆက်နှပ်နေသူများကို keppel မှ supervisor များ မိသွားပါက ပေးလိုက်ဦး၊ ဒါဏ်ငွေ ၅၀။
ကျွန်တော်သည်ပင် တစ်ခါက ဒါဏ်ငွေဆောင်ရပေါက် တိုးမိသေး၏။ မာလာပေးသည့် စက်ဘီးကလေးရလာတော့ ဟိုသည် သွားရတာ အဆင်ပြေသွားသည်။ သည်တွင် သွားရင်းလာရင်းမှ Keppel Pipe shop ထဲ စက်ဘီးစီးဝင်သွားမိသည်။ ရောက်စဆိုတော့ အထာမနပ်သေး။ သည်တွင် အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော ကျွန်တော့်ကို အလုပ်နှေးသည်ဟု complain လုပ်သည့် Ng ဆိုသူက တားကာ ဒါဏ်ရိုက်ပါသည်။ သူက ဖြတ်ပိုင်းကလေးထုတ်ကာ လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်၏။ သည်လက်မှတ်နှင့် ဒါဏ်ငွေသွားဆောင်ရန် ဖြစ်သည်။ တစ်နေ့လုံးလုပ်မှ ၂၄ ကျပ်ရတာ။ ဒါဏ်ငွေက ၅၀ ဆိုတော့ အတော်လေးမျက်လုံးပြူးသွားသဖြင့် မာလာ့ထံ အမြန်ပြေးကာ ငါမသိလို့ပါကွာ ဟု အကျိုးအကြောင်းကို တောင်းတောင်းပန်ပန် ပြောရ၏။ မာလာလည်း ထိုစလစ်ကလေးယူလျှက် ၀ပ်ရှော့သို့လိုက်သွားကာ ထိုသည့် မစ္စတာအန်းကို ပြောပြတောင်းပန်လိုက်မှ ဒါဏ်ငွေဆောင်ရမည့်ဘေးမှ လွတ်ကင်းလေသတည်း။ ကျွန်တော် မာလာ့ကို အတော် ကျေးဇူးတင်သွားပါသည်။
Keppel တွင် ဒါဏ်ငွေဆောင်ကြရသည့် ကိစ္စမှာ သိပ်အထူးအဆန်းမဟုတ်ပါ။ သင်္ဘောပေါ်တွင် ခိုးပြီး ရှုရှုပေါက်မိသဖြင့် လည်းကောင်း၊ သင်္ဘောပေါ်မှ အဆင်းတွင် ပျင်းသဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော gang way များမှမဆင်းဘဲ ပြင်ဆင်ရန် သင်္ဘောကိုယ်ထည်ကို ဖောက်ထားသည့်အပေါက်နှင့် ကုန်းပေါ်သို့ဆက်ထားသည့် အခင်းပြားမှ ခိုးဆင်းမိသဖြင့်လည်းကောင်း တစ်ကြောင်းမဟုတ် တစ်ကြောင်းနှင့် ဒါဏ်ငွေတပ်ခံရတတ်ပါသည်။
တစ်ခါကမူ ကျွန်တော့လက်အောက်မှ ကုလားကလေးမှာ အလုပ်ကလည်းပင်ပန်း၊ နေကလည်းပူ၊ ဆောင်းထားရသော ခမောက် (Helmet) ကြီးကလည်းလေး ဆိုတော့ ပိုက်ပေါ်ထိုင်ကာ ခမောက်ကို ခဏချွတ်မိပါသည်။ ဘယ်တုံးကတည်းက ချောင်းနေသည်မသိ။ သူ ခမောက်ချွတ်လိုက်သည့် ခဏတွင်ပင် အင်မတန် အပေါက်ဆိုးလှသော မျက်နှာတွင်ကျောက်ပေါက်မာများနှင့် တရုတ် safety တစ်ကောင် ချက်ခြင်းပေါက်ချလာကာ ကုလားကလေးကို ဖမ်းပါတော့သည်။ တစ်နေ့မှ ၁၆ ကျပ်ရသော ကုလားကလေးခမျာ ဒါဏ်ငွေ ၅၀ ဆောင်ရမည် ဆိုတော့ ငိုမဲ့မဲ့ ဖြစ်သွား၏။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ထံသွားကာ သူ ငါ့အလုပ်သမားကလေးပါကွာ။ ငါကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ အိုက်လွန်းလို့ ခု ခဏချွတ်မိတာပါ။ ငါသိရင် ဒီလိုမဖြစ်ရပါဘူး ဟု သွားတောင်းပန်ကာမှ ကိုယ်တော်က သဟောက်သဟာနှင့် ဟင်၊ မင်းက ဘာကောင်မို့လို့ ငါ့ကိုလာပြောရတာလဲ။ မင်းက သူ့ supervisor ဆိုရင် မင်းကိုပါ ဖမ်းလို့ရတယ်။ မင်းနားလည်လား ဟု အော်ဟစ် ငေါက်ငမ်းပါသည်။ လူအများရှေ့မှာမို့ ကျွန်တော် တော်တော်ရှက်မိပါသည်။ သို့သော် ဘာမှ ပြောမနေတော့ပဲ အသာ နောက်ဆုတ်လိုက်ပါသည်။ သူတို့က အထက်က၊ ကိုယ်ကအောက်က။
(၁၀) သူတို့ဆီက ယဉ်ကျေးမှု
ကျွန်တော် စင်ကာပူရောက်စက သူတို့တွေ ပြောဆိုဆက်ဆံတာကို နည်းနည်းမှ သဘောမကျ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာယဉ်ကျေးမှု နှင့် အကွာကြီးကွာလှသည်။ သည့်အတွက် အလွန်နာသာခံခက် ဖြစ်မိသည်။ သူတို့ယဉ်ကျေးမှုကို ကျွန်တော် နားမလည်နိုင်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်ရောက်သွားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း နိုင်ငံမျိုးစုံက လူမျိုးစုံ၊ စရိုက်မျိုးစုံ၊ အလွှာမျိုးစုံ၊ ဘာသာမျိုးစုံ၊ စကားမျိုးစုံ။ နောက်ပြီး ယဉ်ကျေးမှု မျိုးစုံ။
မြန်မာပြည်တွင် ကျွန်တော်ကျင်လည်ခဲ့ရသည့် ပတ်ဝန်းကျင်က တက္ကသိုလ်ဆိုတော့ ဆက်ဆံရသူများမှာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား၊ ဆရာဆရာမ အများစုဖြစ်သဖြင့် အေးအေးချမ်းချမ်း၊ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့၊ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ရှိသည်။ ယခုလို ဗြုန်းစားကြီး သည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ထိတွေ့လိုက်ရတော့ ကျွန်တော့်မှာ တော်တော်နှင့် အထာမကျနိုင်။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေမှာ ဘာပဲပြောပြော ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားတော်၏ အဆုံးအမအောက်တွင် ကြီးပြင်းလာကြသည်ဖြစ်ရာ အင်မတန်ရိုင်းလှသော သူတွေတောင် သူတို့လောက်မဆိုးဟု ဆိုရမည်။ ကျွန်တော်တို့ ယဉ်ကျေးမှုတွင် “ကြီးသူကိုရိုသေ၊ ရွယ်တူကို လေးစား၊ ငယ်သူကိုသနား” ဆိုတာရှိသည်။ ဆရာသမားဆိုလျှင်၊ ကိုယ့်အထက်လူကြီးဆိုလျှင်၊ ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးသူများကိုဆိုလျှင် အရိုအသေပေးကြရမည်မှန်း တကူးတကသင်ပေးနေစရာကို မလို။ နောက်ပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဆက်ဆံလျှင် အပြန်အလှန် ရိုသေလေးစား စွာ ဆက်ဆံကြသည်။ စကားပြောလျှင် တိုးတိုးသက်သာ၊ အေးအေးဆေးဆေးပြောသည်။ အရက်ဝိုင်း နှင့် ရန်ဖြစ်ကြသည့်အခါများမှလွဲ၍ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဆဲလားဆိုလားပြောတာ၊ နင်ပဲငဆပြောတာ ရှာမှရှားထဲကဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တွင် အရာရှိဆိုလျှင် မိမိအဆင့်နှင့်လျော်ညီစွာ နေထိုင်ပြုမူ ပြောဆိုဆက်ဆံသည်။ ဆဲကာဆိုကာ ပြောသော အရာရှိကို ကျွန်တော့်တစ်သက် မကြုံခဲ့ရစဖူး။ အဲလေ၊ ကျွန်တော်ကျင်လည်ခဲ့ရတာက တက္ကသိုလ် အသိုင်းအ၀ိုင်းကြောင့်လား မပြောတတ်ပါ။ သို့သော် အခြား မြန်မာအရာရှိလူကြီးများလည်း လူလည်ခေါင်တွင် ဆဲဆိုပြောတာ ရှိမည်မဟုတ်ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည် ပါသည်။
Keppel သင်္ဘောကျင်းရောက်သွားတော့ ပထမဦးဆုံးကြုံရသည်မှာ ခြေထောက်နှင့်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကတော့ ရိုးနေပြီ။ ကျွန်တော်က ရောက်စဆိုတော့ မသိ။ ဒါ ငါ့ကို သက်သက်စော်ကားတာ ဟု ထင်မိသည်။ မြေကြီးပေါ်ရှိ ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုပြချင်လျှင် ခြေ ထောက်နှင့် ထိုးပြသည်။ အစတော့ ကျွန်တော် သည်လို ခြေထောက်နှင့်ပြတာကို ကန့်ကွက်သေးသည်။ သူတို့နှင့် စကားများသည်။ နောက်တော့မှ ဒါ သူတို့ယဉ်ကျေးမှုပေဘဲ ဟု နားလည်ရသည်။
နောက်ပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အပြန်အလှန် ရိုသေလေးစားမှုမရှိ။ အဆဲမပါဘဲ စကားမပြောတတ်။ မနက်မိုးလင်း ကတဲက ဆဲလိုက်ကြသည်မှာ မိုးမွှန်နေသည်။ F x x king ဆိုသည်ကို သူတို့က ထမင်းစားရေသောက် ပြောနေကြသည်။ ယောက်ျားပစ္စည်း၊ မိန်းမပစ္စည်း အစုံဆဲသည်။ လူကြီးကလည်း လူငယ်ကိုဆဲသည်။ လူငယ်ကလည်း လူကြီးကိုမခန့်၊ ပြန်ဆဲသည်။ သို့သော် သူတို့စိတ်ထဲမတော့ ဘယ်လိုမှ ခံစားရပုံမပေါ်ပါ။ ပြောရိုးပြောစဉ်၊ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။ ဆဲတာကလည်း အစုံဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်ပျက်နှင့် ဆဲသည်။ တရုတ်လိုဆဲသည်။ မလေးလိုဆဲသည်။ ကုလားလိုတောင် ဆဲလိုက်သေး။
ဒါ အလုပ်သမားတွေအကြားမှာတင် မဟုတ်ပါ။ သူတို့လူကြီး၊ အရာရှိများလုပ်သော အစည်းအဝေးတွင်လည်း မထူးပါ။ လက်အောက်ငယ်သားများအနေနှင့်လည်း ကိုယ့်အထက်အရာရှိမို့ အရိုအသေပေး၊ လေးလေးစားစား ဆက်ဆံတာ မတွေ့ရပါ။ ကျွန်တော်တို့ သူဌေးမှာလည်း အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူကအော်လိုက်၊ သူ့အလုပ်သမားတွေက ပြန်အော်လိုက်။ သူတို့ဟာနှင့် သူတို့တော့ ဟုတ်လို့။
သူဌေးမှာ ညနေပိုင်း ပြန်ခါနီးလျှင် ၀တ်ထားသော အိုဗာဟောကြီးကို ချွတ်ကာ အရပ်ဝတ်၊ အရပ်စားများနှင့် ပြန်လဲပါသည်။ လဲသည်ဆိုရာတွင် ကွယ်ရာထောင့်ရာတွင် လဲသည်မဟုတ်။ ကျွန်တော်တို့ ရုံးခန်းအတွင်းတွင်ပင် ကျွန်တော်တို့ရှေ့၌ under wear (အတွင်းခံဘောင်းဘီ) ကလေးမျှချန်ကာ အကုန်ချွတ်ချလိုက်လျှက် လဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါ သူတစ်ဦးတည်း မဟုတ်။ Ah Wee လည်း သည်အတိုင်း ဖြစ်သည်။ သူတို့ကတော့ ရိုးလို့။ မြန်မာပြည်တွင် အောက်ခံဘောင်းဘီသာချန်လျှက် အ၀တ်အားလုံးကို လူကြားသူကြားထဲ ချွတ်ချမည့် အရာရှိဖြစ်စေ။ အခြား ယောက်ျားတစ်ဦးဦးဖြစ်စေ ရှိမည်မထင်ပါ။
သူတို့ သန့်မလိုလိုနှင့် ညစ်ပတ်တာက တစ်မျိုး၊ မြန်မာပြည်တွင် သန့်မလိုလိုနှင့် ညစ်ပတ်တာက တစ်မျိုး။ သူ့ဓလေ့နှင့်သူ။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တွင် ထမင်းဆိုင်များတွင် ထမင်းစားလိုလျှင် နောက်ဖေး ချက်သည့်ပြုတ်သည့်နေရာ၊ ပန်းကန်ခွက်ယောက်များ ဆေးသည့်နေရာများကို ယောင်လို့မှ သွားမကြည့်ပါလေနှင့်။ စားထားသမျှ အကုန်ပြန်အန်ထွက်လိမ့်မည်။ သိလျှင်သော်မှ မသိယောင် ဆောင်ထားပါ။ သည်တော့မှ ထမင်းစားလို့ဖြစ်မည်။
စင်ကာပူမှာကျ တစ်မျိုး။ ချက်သည့်ပြုတ်သည့်နေရာ၊ ဆေးကြောသည့်နေရာများတွင် သန့်ပါသည်။ သူတို့က ရေကို အပေါသုံးကာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည်။ မလုပ်လို့လည်းမရ။ ထိုဆိုင်များကို NEA (National Environment Agency) က အမြဲစစ်သည်။ သူတို့သတ်မှတ် ထားသော ကျန်းမာရေးစံနှုံးများနှင့် မညီညွတ်လျှင် ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ကို သိမ်းလို့ရသည်။ လိုင်စင်အသိမ်းခံရပြီး သည်အတိုင်း ဆိုင်ပြန်ဖွင့်လို့ မရ။ စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်နည်းသင်တန်း ပြန်တက်။ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် ရပြီဆိုမှ လိုင်စင်ပြန်လျှောက်။ သို့သော် စားသည့်သောက်သည့်နေရာတွင်မတော့ အင်မတန် ပက်စက်လှသည်။
၀က်မွေးဖူးသူများ သို့မဟုတ် ၀က်မွေးသည်ကို လေ့လာဖူးသူများ၊ သို့မဟုတ် ၀က်ခြံသို့ရောက်ဖူးသူများ ၀က်စာကျင်းတွင် ၀က်များစားနေသည်ကို မြင်ဖူးကြပါလိမ့်မည်။ ၀က်စာခွက်ထဲမှ အစာများကို နှုတ်သီးနှင့်ကော်ပြီး တပျပ်ပျပ်နှင့်စားကာ ၀က်စာကျင်းဘေး နားတွင် အစာများဖိတ်စဉ် ပေပွ၊ ညစ်ပတ်နေပါသည်။
သူများစားတာကို ၀က်စားတာနှင့် မနှိုင်းကောင်းပါ။ သို့သော် သူတို့စားသည်မှာ သည်အတိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဟင်းကို စားလို့ရတာ ရွေးချယ်မစားဘဲ အကုန်ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်သည်။ နောက်ပြီးမှ စားမရတာများကို တစ်ဖြီးဖြီးနှင့် ထွေးထုတ်လိုက်ကြသည်။ ဥပမာ - သူတို့က ကြက်သွန်ဖြူဥကို မြန်မာများလို ဟင်းထဲသို့ အခွံနွှာ၊ ထုထောင်းထည့်တာမဟုတ်ဘဲ အခွံများနှင့် ဥလိုက်ထည့်ပါသည်။ စားသည့်အခါတွင် ထို ကြက်သွန်ဖြူဥကို အလုံးလိုက်ပင် ပါးစပ်ထဲထည့်ဝါး၏။ နောက်မှ ဖွီးဖွီးနှင့် အခွံများကို စားပွဲပေါ် ထွေးထုတ်ပါသည်။ ပုဇွန်စားရာတွင်လည်း သည်အတိုင်းပင်။ ပုဇွန်ခွံများကို ပါးစပ်မှစားပွဲပေါ်သို့ တဖွီးဖွီးနှင့် ထွေးထုတ်ပါသည်။ သို့အတွက် သူတို့ထမင်းစား သော နေရာသို့ သွားကြည့်လိုက်ပါက ထမင်းလုံးများ၊ ဟင်းစဟင်းနများ၊ ငါးရိုးများ၊ ပုဇွန်ခွံများ၊ ကြက်သွန်ဖြူခွံများ စသည်တို့ ရှုပ်ပွညစ်ပတ် နေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ သို့သော် စားပြီးသားထမင်းပန်းကန်များ လိုက်သိမ်းသော အဖိုးကြီး၊ အဖွားကြီးများက မပြတ်လိုက်သိမ်း၊ သိမ်းရင်းလည်း စားပွဲကိုလည်း အ၀တ်ရေစိုနှင့် သန့်ရှင်းရေး မပြတ်လုပ်နေသဖြင့်သာ စားပွဲများမှာ သန့်ရှင်းနေရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကုလားများ စားတာကျ တစ်မျိုး။ သူတို့က ထမင်းကို လက်နှင့်စားသည်။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာများလည်း လက်နှင့်စားတာပါဘဲ။ သို့သော် စားပုံချင်းကွာသည်။ သူတို့က ထမင်းပေါ်သို့ ဒါးလ် (Dahl) ခေါ် ဟင်းရည်များ လောင်းချကာ လက်နှင့်ပယ်ပယ်နယ်နယ် နယ်သည်။ နယ်ရာတွင် လက်ဖ၀ါးပြင်တစ်ခုလုံးနှင့် နယ်ခြင်းဖြစ်၏။ ပထမ လက်ဖ၀ါးပြင်နှင့် ဖိကာဆွဲသည်။ ထို့နောက် လက်ချောင်းများ နှင့် ဖွသည်။ သည့်အတွက် လက်ကောက်ဝတ်အောက် လက်ဝါးပြင်တစ်ခုလုံးမှာ လက်ဖ၀ါးရော လက်ဖမိုးမှာပါ ထမင်းလုံးများ၊ ဟင်းရည်များနှင့် ပေကျံကုန်ပါသည်။ ဤဟင်းရည်များပေကျံနေသော လက်ကို လျှာကြီးတန်းလန်းထုတ်လျှက် အားရပါးရ လျက်လိုက်ပါသေးသည်။ ထို့နောက်တော့ ခုန နယ်ဖတ်ထားသော ထမင်းကို လက်နှင့်ကြုံးလျှက် လျှာကြီးကို အသားကုန်ထုတ်ကာ စားပါသည်။ သူတို့က ထမင်းကို ပန်းကန်နှင့်မစား။ ပန်းကန်ထဲ စက္ကူ သို့မဟုတ် ငှက်ပျောဖက်ခင်းကာ စားသည်။
သည်တွင် ကြားဖြတ်ပြောလိုသည်မှာ သူတို့ ဟင်းချက်ပုံဖြစ်ပါ၏။ ကျွန်တော်တို့က မြန်မာဆိုတော့ မြန်မာလိုချက်တာသာ ကြိုက်ပါသည်။ တရုတ်က တရုတ်လိုချက်တာကြိုက်မည်။ မလေးက မလေးလိုချက်တာ ကြိုက်မည်။ ကုလားက ကုလားလိုချက်တာ ကြိုက်မည်။ ခက်သည်မှာ သူတို့တိုင်းပြည်တွင် ကုလားစာ၊ မလေးစာ၊ တရုတ်စာများကို ကန်တင်းတိုင်းရနိုင်သော်လည်း မြန်မာစာမှာ ရဘို့ မလွယ်သဖြင့် ကျွန်တော်တို့မှာ ဤအစားအစာသုံးမျိုးထဲက တစ်မျိုးမျိုးကို ရွေးရသည်။
တရုတ်ဟင်းများမှာ ပဲငံပြာရည်များ နင်းကန်ထည့်၏။ အသီးအရွက်ကျတော့ ရေလုံပြုတ်၊ သို့မဟုတ်ပါက ပဲငံပြာရည်နှင့် ကြော်သည်။ ၀က်သားကိုလည်း ပဲငံပြာရည်နှင့် ချက်သည်။ အကယ်စင်စစ်၊ ချက်သည်ဟုပင် မဆိုနိုင်ပါ။ ပဲငံပြာရည်နှင့် ပြုတ်ထားတာမျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ထမင်းစားသောအခါ ထို ၀က်သားပြုတ်ထားသော ပဲငံပြာရည်နှင့် ဆန်းစားကြသည်။ ဤပဲငံပြာရည်ကြီးကို ကျွန်တော်အလွန် မုန်းပါသည်။ ရောက်စက အောင့်အည်းကာ ဖြစ်ညှစ်စားနိုင်သေးသည်။ ခုတော့ မစားနိုင်တော့ပါ။ အခြား ပဲငံပြာရည် မပါသောဟင်းကိုသာ ရွေးပါသည်။ သို့တိုင် ကိုယ်တော် တို့က စေတနာတွေပိုကာ လက်မြန်ခြေမြန်နှင့် ထမင်းကို ပဲငံပြာရည်များ ဆမ်း ဆမ်း လွှတ်လိုက်တတ်ကြ ပါသေးသည်။ သူတို့ကို မျက်ခြေမပြတ် ကြည့်နေပြီး ပဲငံပြာရည်မဆမ်းဘို့ အလျှင်အမြန်တားရသည်။
မလေးဟင်းများမှာတော့ သူတို့အခေါ် ကာရီပေါင်ဒါ (curry powder) ခေါ်သည့် ဟင်းခတ်အမှုံ့များ (မြန်မာပြည်တွင်သုံးသည့် နနွင်းမှုံ့ကဲ့သို့ - သို့သော် သူတို့ကာရီပေါင်ဒါက အစုံစပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်) နင်းကန်ထည့်ပါသည်။ စပ်သလိုလို၊ ချိုသလိုလို။ နောက်ပြီး အုန်းနို့များလည်း ထည့်ချက်ပါသေး၏။ မလေးအစားအစာများအနက် ကျွန်တော်မနှစ်သက်ဆုံးမှာ ငြုပ်ဆီများနီရဲနေအောင် ထည့်ကြော် ထားသည့် မလေးခေါက်ဆွဲကြော် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခါစားဖူးပြီးကတည်းက တပ်လန်သွားပါသည်။ ထူးဆန်းသည်ကို ပြောရလျှင် ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလည်း မလေးရှားခေါက်ဆွဲကြော်၊ ပသျှုးထမင်းကြော်များ စားဖူးပါသည်။ ကောင်းလည်းကောင်းသလို ကျွန်တော် ကြိုက်လည်း ကြိုက်ပါသည်။ မလေးများကိုယ်တိုင်ကြော်သော မလေးခေါက်ဆွဲကြော်ကျတော့ ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှ စားလို့မရပါ။
ကုလားစာမှာတော့ မြန်မာပြည်မှ ကုလားစာနှင့် အတန်ငယ် ဆင်ပါသည်။ သို့သော် မြန်မာပြည်မှ ကုလားစာများမှာ ကျွန်တော်တို့ ပါးစပ်နှင့်အကိုက် ချက်ထားသဖြင့် စားလို့ရသည်။ ကောင်းလည်းကောင်းပါသည်။ သို့သော် စင်ကာပူကန်တင်းများမှ ကုလားစာများကိုမူ ကျွန်တော် မကြိုက်ပါ။ ကုလားစာမှန်လျှင် နံမည်၊ စပ်မည်၊ ပူမည်။ ဒန်ပေါက်ချင်း အတူတူ သူရို့ဒံပေါက်က မြန်မာပြည်မှ ဒံပေါက်လို စားလို့ မကောင်းပါ။ ဈေးမှာလည်း ရိုးရိုးထမင်းနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ဈေးကြီးသော (restaurant) ကုလားဆိုင်များမှ အစားအသောက်များမှာမူ ကောင်းပါသည်။ မဆာလာ ဒိုဆေ၊ ချာပါတီများကို ကျွန်တော် မကြာခဏ စားဖြစ်ပါသည်။
စားသောက်ပြီးကြလျှင် နေ့လည်နေ့ခင်း တစ်ရေးတစ်မော အိပ်ကြပါသည်။ အိပ်ပြီဆိုလျှင်လည်း တွေ့သည့်နေရာတွင် ကြုံသလို လှဲအိပ်လိုက်ကြခြင်းဖြစ်၏။ အိမ်သာရှေ့တွင်လည်းကောင်း၊ ကန်တင်းကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ လှေခါးအောက်များတွင် သော်လည်းကောင်း၊ လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်းများတွင်သော်လည်းကောင်း နေရာလပ်ရှိလျှင် သူတို့အတွက် အိပ်လို့ဖြစ်ပြီ။ အိပ်သည်ဆိုရာ၌ ခေါင်းအုံး အထွေအထူးရှာနေစရာမလို။ စီးထားသော ဖိနပ် (safety shoe) ကို ချွတ်ကာ ခေါင်းအုံးအိပ်ကြသည်။ အင်မတန်ထူးဆန်းသော လူမျိုးများဖြစ်ပါ၏။
နောက်ပြီး သူတို့မှာ ဘုန်းတို့ကံတို့ဆိုတာလည်း ရှိပုံမရ။ မြန်မာများကတော့ ကြိုးတန်းအောက်ဝင်လျှင် ဘုန်းကံနိမ့်တတ်သည် ဟု အယူရှိသည်။ မိန်းမ အသုံးအဆောင်များနှင့် ယောက်ျားအ၀တ်အစားများ အတူရောထားလေ့မရှိ။ အမျိုးသမီးလုံချည်များကို အမြင့် (ခေါင်း အထက်) တွင် လှမ်းရိုးထုံးစံမရှိ။ ယောက်ျားဖြစ်စေ၊ မိန်းမဖြစ်စေ၊ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီများကို လူမြင်ကွင်းတွင် မလှမ်း။ ကွယ်ရာထောင့်ရာ တွင် လှမ်းကြသည်။ ဒါ ကျွန်တော်အင်မတန်ချစ်သော ကျွန်တော်တို့လူမျိုး၏ ဓလေ့ထုံးစံဖြစ်ပါသည်။
သူတို့ကတော့ အာ၊ အ၀တ်ပဲ၊ ဘာကွာတာလိုက်လို့ ဟု သဘောထားပုံရပါသည်။ ခြေအိတ်များ၊ မိန်းမဘောင်းဘီများ၊ ဘရာစီယာ များ၊ အောက်ခံဘောင်းဘီများကို ယောက်ျားအင်္ကျီများ၊ မျက်နှာသုတ်ပုဝါများ၊ ခေါင်းအုံးစွပ်များ နှင့် အတူရောလျှော်၊ အတူရောလှန်းပါသည်။ လှန်းသည်ဆိုရာတွင် နိမ့်သည်ဖြစ်စေ၊ ခေါင်းပေါ်ကတန်းဖြစ်စေ၊ ဧည့်ခန်းတွင်ဖြစ်စေ လှန်းပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရုံးမှ တရုတ်မကလေးက စရင်းနောက်ရင်း သူ့ထက်ကြီးသော တရုတ်ကြီးကို ခြေထောက်နှင့်လှမ်းကန်လိုက်တာ တွေ့ဖူးပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုအရ အလွန်ရိုင်းသော လုပ်ရပ်ဖြစ်သော်လည်း သူတို့အဖို့တော့ သာမန် သမားရိုးကျ အပြုအမူတစ်ခု သာ ဖြစ်ပါသည်။ စင်ကာပူရောက်စကသာ သည်အပြုအမူ၊ အပြောအဆို၊ နေပုံထိုင်ပုံများကို အထူးအဆန်းဖြစ်နေသော်လည်း ခုတော့ မဆန်းတော့ပါ။ ဒါ သူတို့ယဉ်ကျေးမှုပဲ။ ကိုယ်နှင့်မဆိုင် ဟု သဘောထားလိုက်ပါသည်။
တဆက်တည်းပြောချင်သည်မှာ မြင်နေကျ၊ တွေ့နေကျဖြစ်၍ အထူးအဆန်းဟု သဘောမထားတော့သော ဘတ်စ်ကားပေါ်၊ ရထား ပေါ်များတွင် တွေ့ရသည့် ယောက်ျားနှင့်မိန်းမ ပလူးနေသည့် မြင်ကွင်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရင်ချင်းအပ်၊ အတင်းအကျပ်ဖက်ထား ကာ လူကြားထဲတွင် ဟိုပွတ်သည်ပွတ်၊ နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့ကာ တပြွတ်ပြွတ်လုပ်နေကြသည့် မြင်ကွင်းများဖြစ်ပါသည်။ ဒါလား ယဉ်ကျေးမှု။ သိပ်မကြာခင် တလောက ရထားပေါ်တွင် သည်ကဲ့သို့ ပွတ်နေသော အတွဲတစ်တွဲကို တွေ့ရ၏။ သည်ကဲ့သို့အတွဲများနှင့် ရင်ဆိုင်တိုးရလျှင် ကျွန်တော်က နောက်ခိုင်းနေလေ့ရှိပါသည်။ သို့သော် သူတို့ပြောနေသော စကားသံကြားလိုက်မှ မျက်လုံးပြူးသွားပါ၏။ မြတ်စွာဘုရား။ မြန်မာကောင်လေးနှင့် ကောင်မလေး ဖြစ်ပါသည်။ အတုခိုးတာကလည်း မြန် မြန်လှချည့်။ ကောင်းတာသာ အတုမခိုးချင်နေရမယ်။ ဒါမျိုးတော့ သင်ပေးစရာမလိုပါ။
စင်ကာပူပေါက် သို့မဟုတ် စင်ကာပူတွင် ငယ်စဉ်ကတည်းက ကြီးပြင်းလာသည့် ကလေးများမှာ သည်အတိုင်း ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမည်။ အတုမြင် အတတ်သင်ကိုး။ ဘယ်လိုမှတားလို့ရမည် မဟုတ်။ ယခုပင်လျှင် စင်ကာပူရောက် မြန်မာလူငယ်များ ၀တ်စားထားသည်မှာ စကားသာမပြောလျှင် မြန်မာဟုပင် မထင်ရပါ။ ကျွန်တော်တို့မှာ old model, out dated ကြီးများ ဖြစ်သွားပါပြီ။
- - - - - - - - - - - - x x x - - - - - - - - - - - - -
Posted by အေးငြိမ်း at 9:50 AM
ခရစ္စတိုဖာ ပေါက်ကျိုင်း ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ (၂)